Huhu hejihoogu na-ekwu,
June 1, 2010 na 8:02 obi
M kwalite taa… ma ngwa mgbakwunye ugbu a kwụsịrị nsụgharị.
Ọzọkwa didie ke URL traslating ọrụ? ka m hụ ihe ọ bụla na-arụ ọrụ Na na na ma.
June 1, 2010 na 8:28 obi
Na URL translation na-ewe ahụ akụkụ nke URL ndị translatable na-agbali ịsụgharị ha azụ na-apụta, pụta bụ mgbe ahụ ka na peeji nke a emepụtara, niile urls na-anọchi ha translations, azụ, bụ mgbe onye ọrụ rịọrọ ndị dị otú ahụ a URL, na ngwa mgbakwunye na-agwa WordPress nke na peeji nke onye ọrụ n'eziokwu zoro aka na. mkpa ka i nwee nkwado ya na ntọala.
M ga-enwe obi ụtọ na-elele ihe mere ngwa mgbakwunye kwụsịrị asusu, ma Achọrọ m URL ile anya…
Napụ Davies na-ekwu,
June 1, 2010 na 8:06 obi
Translation of URL si!!- M na a na-achọ na onye translation ngwa mgbakwunye ahụ n'ezie useable taa (ụbọchị na ị hapụ URL translation version) M-abịa gafee gị ngwa mgbakwunye – Daalụ nke ukwuu!
Ndi nwere anya na ya ma na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu – dị nnọọ mma karịa ihe ọ bụla si ebe ahụ.
Ihe m na-amasị ya bụ:
– na peeji nke-edezi
– emekwa ka omenala igodo ntọala ahụ
– Ọbụna sụgharịta niile ke kiet ke otu SEO meta na nkọwa!
Fantastic – Daalụ…..
June 1, 2010 na 8:29 obi
Daalụ maka Ekele… Echiche maka ndozi a ga-akpọrọ
June 2, 2010 na 6:01 obi
Daalụ maka oké ngwa mgbakwunye. Taa m kwalite ya ọhụrụ version. Ọ na-arụ ọrụ dị ka atụrụ anya. Ma, e nwere ụfọdụ n'ime obere njehie m na-eche.
Ndabara asụsụ e ji m na website bụ Bahasa Indonesia. Mgbe upgrading, ọ bụrụ na Bekee na frontend mgbe ọ na ha na peeji nke agbanwebeghị.
M na-agbalị mee ka Bekee m ndabara asụsụ na ha na peeji nke ọ na-arụ ọrụ. Mgbe, agbanwe ya azụ Bahasa Indonesia, ma frontpage ka gosipụta English by ndabara.
M na-eme adịghị ebe njehie kpọmkwem. M ka na-soro ya mgbe ede a. Ma eleghị anya, ọ si nchọgharị dị n'ime oghere, mana anaghị m eche.
Daalụ maka ihe ọ bụla aka..
June 2, 2010 na 7:01 obi
M hụrụ gị na saịtị na Bahasa, eleghị anya ị nwee ike asụsụ nchọpụta mma nke na-eziga gị ka Bekee na peeji nke, bụ URL agbanwe gị okwu mmanya?
June 2, 2010 na 7:08 obi
Ugbu a ka m na-ahụ ya ma eleghị anya a nsogbu ndabara asụsụ, biko gbalịa adọkpụpụta na Basha n'elu, ọ kwesịrị ịgbanwe. ma ọ bụrụ na ọ ga-arụ ọrụ, Aga m na-akọrọ gị ozugbo
June 3, 2010 na 5:46 obi
Apụ, Achọrọ m na-ekele gị maka enyemaka gị, ma taa na ọ dị mba enyemaka ọzọ n'ihi na m na weebụ a kwụsịtụrụ na-enweghị amamọkwa. Kedu ihe ị chere?
Ọ bụghị, M apụtaghị na ọ bụ n'ihi na gị ngwa mgbakwunye, ma m nnọọ na-eche ihe mere usu ihe nkesa na ha kwụsịtụrụ akaụntụ m mgbe m na ịrụkwa m website n'ihi na m maara na e nwere ụfọdụ nsogbu, ma nke ahụ na-enweghị amamọkwa oke. Ọ di mma, ọ bụghị ya?
June 2, 2010 na 8:19 obi
Daalụ maka nke a ngwa ngwa azịza. Ọ bụ ugbu a Bahasa mgbe m agbanwe ndabara asụsụ English. Ọ bụrụ na m setịpụrụ ndabara asụsụ Bahasa, ọ na-egosipụta na Bekee dị ka ndabere.
June 4, 2010 na 1:36 obi
Egwu ọrụ nsụgharị nke posts urls, na”s ukwu kemfe ga-aka nke ukwuu na SEO. Ma, gịnị banyere ibe? M njehie 'page ahụghị’ mgbe m pịa a na peeji nke njikọ ahụ a sụgharịrị ịbụ, post urls bụ iwu dị ka m kwuru, ha na-achọtara na-enweghị ihe ọ bụla na njehie. Ntak emi aa?
June 4, 2010 na 1:38 obi
Otu ndị ọzọ ihe, mgbe m ga-ahụ 'na peeji nke ahụghị’ njehie, peeji reverts azụ ndabara bekee translation. Nke a ga-iwe iwe ọbịa nwere ka reselect asụsụ ha ọzọ, a fix ga-akwa. Daalụ
June 13, 2010 na 5:19 obi
N'ihi ya, ọ dịghị okwu a njehie ahụ?
June 14, 2010 na 11:13 na
Anyị chere na anyị na-ofu ya 0.5.4 (nke a mere na peeji nke nwere ihe atụ ndewo (n'ihi na Hindi) ke thier URL, ndien enye ọkọdọ sụgharịrị) ọ bụrụ na ọ ka na-eme, dị nnọọ zaghachi na URL ka anyị ga-anwale.
nwute n'ihi na agaghị aza mee elu mee, na godspeed
June 5, 2010 na 6:45 obi
Parse njehie: syntax njehie, na-atụghị anya $ utịt ke /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php na akara 2131
Ememme mmelite ọhụrụ ngwa mgbakwunye, na ọhụrụ kwachie, kama na e pụtara. ịgwa m otú e si dozie ya.
June 6, 2010 na 2:04 na
Ntak ha si wee na ha na wijetị? Ndien ntak emi m ike na mbụ translation ke Kacha ọhụrụ version iji gbanwee?
M na-agbalị nke 0.3.4 version ha nke ọma n'ebe ahụ wijetị na ha, ma enweghị m ike ịsụgharị nwere oke.
M na-atụ anya na ọzọ version ama mmeghe gị ya kpam kpam mgbe onye.
Na agbanyeghị mma obere ngwa mma!
Ọ na-, na ka ihe niile na-arụ ọrụ m ga-emerịrị iji 0.5.2 version n'akụkụ, edi ke wijetị njehie dee ya dị ka ihe osise na-egosi na ọ na.
June 6, 2010 na 12:07 obi
Anaghị m aghọta gị abụọ mbụ ajụjụ, ya mere, biko rephrase ha
M aghọtaghị njehie ị na-ahụ, Ọ dịghị anya ga-m koodu, ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ, ke emi pụọ mgbe transposh bụ nkwarụ?
June 6, 2010 na 9:43 obi
My bekee bụ ntakịrị ogbenye m na-arịọ gị nke a na ndo.
Ọ bụrụ na ndị transposh agbanyụrụ ahụ nakwa ihe niile ọrụ.
My mbụ ajụjụ: Gịnị na-arụ ọrụ ahụ wijetị na ha elu ma ọ bụrụ na transposh bụ na agbanyere ya?
My abụọ: Ntak emi m ike ịsụgharị ke ohuru version na 0.5.3 ọ bụrụ na m na-eji dezie translation?
M ga-eji 0.5.2 version becouse na m nwere ike ịsụgharị a.
Ma nke iji ma na m nwee ndabara asụsụ translation na onye maara ya ma ihe na-abụghị workin.
Ndi emi ndudue ime m na?
June 6, 2010 na 10:05 obi
M nwere olileanya na m nwetara n'oge a
1. Anyị adịghị enyere ya n'elu ha interface, n'ihi na ọ ga-abụ nnọọ ọrụ kwa obere uru, Anyị na-ahọrọ etinye oge ndị ọzọ, (nke anyị na-atụ anya) dị mkpa atụmatụ
2. Nope, anyị maa ahụhụ crawled n'ebe, 0.5.4 dị pụta – biko-enye ya na-agbalị
June 6, 2010 na 10:50 obi
M gbalịrị 0.5.4 version ma dị mwute ikwu na ihe agbanweela.
June 6, 2010 na 10:51 obi
M na-agbalị nke 0.5.4 nsụgharị ma dị mwute ikwu na ihe na-agbanwe.
June 7, 2010 na 7:35 na
na-ekele gị maka oké ngwa mgbakwunye na ndo m ọjọọ English.
Enwere m nsogbu na transposh: mgbe m na-etinye a post, anaghị ntụgharị asụsụ.
Nke a bụ na njikọ:
Daalụ maka ihe ọ bụla enyemaka.
June 7, 2010 na 7:48 na
M na-ahụ gị na saịtị na ọrụ na, na ịpị ọkọlọtọ mgbanwe dị iche iche asụsụ, ma rụọ translation,
Dị gị mkpa inwe ihe kpọmkwem banyere ihe na-adịghị arụ ọrụ
June 7, 2010 na 8:04 na
ofer ekele maka azịza …
Mgbe m ajụ iwu “Ịsụgharị niile” M ike gwụ ya.
June 7, 2010 na 8:09 na
Iwu a bụ iwu ngwa ngwa, iji zere eke ukwuu okporo ụzọ na google si na sava. I nwere ike na-egbochi, na-agbalị iji ya dị iche IP, ma ọ bụ nanị na-eche.
June 7, 2010 na 8:27 na
M na-agbalị ka ịgbakwunye ọzọ njikọ na-adịghị arụ ọrụ:
M ka iwu “Ịsụgharị niile” abalị niile ọ na-abụghị okokụre.
Etie nte nkwụnye blocks.
Tupu nkwụnye ihe ngwa ngwa.
June 7, 2010 na 9:17 na
Ọzọ, a njikọ ọrụ, M na-atụ aro na ị na-agbalị na ịnweta site na dị iche iche na kọmputa / nchọgharị. Nke ịsụgharị niile obim elewo 5 Sekọnd n'etiti ọ bụla ahịrịokwu translation, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-aga ngwa ngwa, ị nwere ike idezi koodu
Ọ bụrụ na i kweere na saịtị bụ iji nwayọọ na-, nke a ga-eleghị anya, eziokwu, ma wụnye APC-enyere otutu
June 7, 2010 na 9:54 na
Ofer Daalụ maka enyemaka …
Gịnị bụ APC?
June 7, 2010 na 10:04 na
Ya onye ome osooso maka PHP, na transposh na-eme ka iwere ya iji zere nchekwa data ohere
June 7, 2010 na 1:07 obi
June 8, 2010 na 1:27 obi
M anọgide na-enwe nsogbu na transposh.
O nwere ike ime nsụgharị.
Ebee ka m ghara ịbanye?
June 8, 2010 na 2:00 obi
ma ọ bụ nke a na njikọ:
June 9, 2010 na 8:33 na
Ọbụna taa na ọ bụ otu ihe ahụ:
M kwukwara ọhụrụ post aka WP ha panel 2.9.2
Clicked “Mmelite” na-echekwa Post, nsụgharị akụkụ Otú ọ dị, ndị egosi ndị dị n'igbe ahụ Transposh na-rapaara na adịghị akpali.
Mgbe m elele na onye ọrụ ahụ dị n'akụkụ nsụgharị, ederede bụ sụgharịrị, ma na-anọgide na akpasarade usem.
M anwale ọzọ na ihe nchọgharị, ma behaves ahụ n'otu ụzọ ahụ.
Daalụ ọzọ maka enyemaka.
June 13, 2010 na 6:45 obi
Ugbu a, ya ọrụ ….
Daalụ ọzọ dị oké ọnụ ahịa aka.
June 14, 2010 na 7:17 na
Ndo, ma m nwere nsogbu ọzọ igbochi.
Na egosi na “igbe Transposh” bụ sweet ma ịmegharị.
M clicked na bọtịnụ “ịsụgharị niile” ma ọ bụ nwee ike igosi nsụgharị (ji ofụri okoneyo).
Tupu “ịsụgharị niile” sụgharịrị ahịrịokwu ndị 197624, mgbe 207311.
Ugbu a, ọ dịghịzi sụgharịa asụsụ ọhụrụ post a na-ekpochi.
M na-eche ma eleghị anya ntakịrị ahụhụ.
Ugbu a, m na-atụ anya ịhụ ya na-arụ ọrụ dị ka tupu ….
June 14, 2010 na 11:11 na
Ị na-asusu a otutu adakpọọla, eleghi anya na google engine ahụ a na-ezighị ezi ụzọ. M na-atụ aro na-agbalị si dị iche na kọmputa / IP. Ọ bụkwa ga-ekwe omume ime ka usoro quicker site na edezi isi na koodu.
Napụ Daves na-ekwu,
June 14, 2010 na 10:14 na
Dị nnọọ ole na ole nke ajụjụ / ga-ekwe omume na njehie:
– Mgbe ụfọdụ, ndị URL anaghị ịsụgharị kwesịrị ekwesị, dị ụzọ iji gbanwee nke a dị ka permalinks ewerekwa untranslated ederede (ejikari na otu ma ọ bụ 2 okwu na URL)? M dị ọzọ anya m na-eche nsogbu ahụ bụ na Mbụ bụ ghara sụgharịrị n'ụzọ kwesịrị ekwesị (ka nke a bụ ihe na-permalinks buru elu) e nwere otu ụzọ ịhụchalụ aha ka na-agbanwe permalinks mgbe ikenye bụ ihe mgbu. Nakwa mgbe ụfọdụ, ọ dịghị ịsụgharị catagory.
– Enwere na agbanyeghị na megharịa nke isi iyi na koodu (dịka meta nkọwa)
– ma ọ bụ na-onye ahu nke ibe echekwara ebeufodu na ihe nkesa na-nchekwa nke mere na ha nwere ike emeziri e?
June 14, 2010 na 11:09 na
Ndewo Ghara Ịna,
Ndị ụfọdụ bụ mgbe ahụ ka URL bụghị ma sụgharịa, ọ bụrụ na ị nwee ike ịsụgharị na post o kwesịrị ime ọsọ ọsọ, nke ịsụgharị niile nakwa ọrụ, Otú ọ dị mwute ikwu na e nwere ka ọ ụzọ idozi nsụgharị a. Ga-abụ na ụfọdụ ga-eme n'ọdịnihu 😉
mara mma na mgbakwunye nwere ike ịbụ imepụta 301 nzaghachi mgbe URL bụ kpọmkwem ezi, Otú ọ dị nke a ga-abụ tricky kwachie na anyị abụghị ndị na anyị chọrọ ime ka anyị na ike e.
Na meta nkọwa na-ịbụ onye sụgharịrị, dị ka ihe ọma dị ka ngwa mgbakwunye pụrụ n'ihi na ugbu a,. Echiche bụ na a na-abịa ga-eme n'ọdịnihu version anyị Aga mepụta interface iji gosi na ihe niile adakpọọla na dị na peeji nke, metas gụnyere.
Enweghị peeji nke echekwara na ihe nkesa na-maka-edezi, ma na ị nwere ike imelite nsụgharị okpokoro ozugbo, ọ bụ ezie na m na-agaghị nwere ike ikwu nke a.
June 14, 2010 na 11:34 na
Daalụ maka azịza. Nwere ike eziokwu ahụ. HTML ke utịt nwere ike ime ka nke ikpeazụ okwu ghara ịtụgharị? Nakwa mgbe sụgharịrị permalinks adịghị agbanwe agbanwe (mgbe na-eji dị ka ihe atụ% post% ) Ọ bụrụ na m setịpụrụ azụ gbara na reposted uche utom emi?
Ọzọkwa wijetị maka transposh – ọ ga-ekwe omume inwe ka a nkụnye eji isi mee ke top ntre ke everypage nke ọkọlọtọ-egosi dị ka obere nkụnye eji isi mee na-agba agba gafee n'elu peeji nke mfe igodo?
Ọ bụrụ na peeji nke ndị ibe ka search maqbx chekwebe ịhụ ihe na-echekwara na nsụgharị na tebụl ma na-agụ dị ka nke ibe?
June 14, 2010 na 11:44 na
Ọtụtụ ajụjụ, ebe a bụ ụfọdụ n'ime azịza:
1. ee, ahụ. HTML ga-eleghị anya, ịkwụsịtụ
2. ha na-agbanwe ngwa ngwa dị ka nsụgharị dị ha, dị nnọọ reposting bụ ejikari ọma ezuru, kama ịsụgharị ihe niile dị eleghị anya, a mma nhọrọ otu obula
3. M iche na ọ bụ ga-ekwe omume, ị pụrụ nwere tweak koodu a bit
4. Nsụgharị peeji nke dị ukwuu peeji nke dị ka gị WordPress peeji nke ndị ibe, otú a crawler paging karịrị ndị peeji nke uche eleghị anya na peeji nke ha dị ka a na peeji nke ga-ejikari ga-ike ịkpọ
June 29, 2010 na 8:56 na
Daalụ maka azịza. Dị mere ụfọdụ n'ihu atule na e nwere nnọọ ihe ole na ole 404 njehie nke dị ka:
(URL) /akụrụngwa / nhọrọ,com_frontpage / Itemid,1/ogologo,ọ na /
M kwukwara na ọ dịghị 404 njehie ngwa mgbakwunye m olileanya na a na ọrụ.
M nakwa na-ole na ole oyiri meta nkọwa na aha isiokwu mkpado – enwere na agbanyeghị na a?
June 29, 2010 na 9:35 na
Na meta nke a na-arụ ọrụ, ọ nakwa ego n'anya sụgharịrị ma ọ bụrụ na ọkụ dịbunụ ahịrịokwu ke page, a ga-eme n'ọdịnihu ga-version mee nke a ka mma.
Anaghị m na- 404 njehie, ndị na-ekwesịghị ime eme, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka m n'ezie ịhụ ha na m chọrọ ịhụ URL na-emepụta dị otú ahụ ihe ọjọọ njikọ
June 29, 2010 na 11:00 na
The redirect plugin mere atọ dị ka 404 si na-niile redirecting ka a set page. Nwere anya http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
dị ka ihe atụ nke a na peeji nke kere ma ugbu a ibugharị.
Ka meta m na-eji akpa 160 okwu post maka kwuru – M na-eji ihe niile ke kiet ke otu SEO a bụ ebe nsogbu ahụ nwere ike ịbụ. Ọ na-mgbe ụfọdụ sụgharịta ụfọdụ n'ime ndị a ma-ejikarị niile ya.
Na-atụ anya update… daalụ ọzọ.
November 25, 2010 na 6:06 obi
Ndewo m gị n'anya ngwa mgbakwunye, kama m na-enwe nsogbu na onye na peeji nke: ọ sụgharịrị ọrụ ugbo si ahịa na ‘ banye na URL, otú ahụ ka m na-eche na-emekwa ka ọ na-arụ ọrụ site n'aka nri…
Ị pụrụ ịhụ njehie site na ịpị njikọ USA ọkọlọtọ (mkpụrụedemede nri akuku) a njikọ:
Ọ bụla echiche otú m pụrụ idozi nke a? Ekeme ndidi imetụ ihe na nchekwa data ma ọ bụ transposh dị n'ime oghere?
November 25, 2010 na 7:03 obi
Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute uhie nsogbu m, ị kwesịrị ị na-eme ule post jiri nkebi okwu n'ime kopi, ịnweta ya sụgharịa ma dozie translation na-nkwusora si na ya, ọ ga-ọkọk URL ke mbụ sụgharịrị post. Ọ bụ ezie na nke zuru okè n'ihi na okwu ahụ ga-abụ na ihe ọjọọ (na-ahapụ ọrụ ubi Market kama Ọrụ Ugbo si Market) ma ọ bụ meenụ ihe ngwa ngwa fix.
Daalụ nke ukwuu n'ihi na echiche Ofer.